Rafitra fitantanana kalitao - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
XY Tower dia nampanantena fa hanome serivisy ho an'ny mpanjifantsika. Ny rafitra fitantanana kalitao dia iray amin'ireo politika ifotoran'ny XY Tower. Mba hahafahana miasa amin'ny rafitra fitantanana kalitao, XY Tower dia miantoka ny loharanom-pahalalana ilaina sy ny fiofanana omena ary ny mpiasa rehetra dia mandray anjara mavitrika amin'ny fampiharana ny Quality Management System.
Ho an'ny XY Tower, ny kalitao dia fitsangatsanganana fa tsy toerana. Noho izany, tanjonay ny hitazomana ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny famokarana fitaovana earthing kalitao, tilikambo fandefasana, tilikambo telecom, rafitry ny substation ary kojakoja vy amin'ny vidiny mifaninana ary miantoka ny fandefasana azy ara-potoana.
Amin'ny maha-ampahany tsy mitombina amin'ny fizotry ny famokarana, ny kalitao dia azo antoka araka ny fenitra ISO. Ny rafitra XY Tower Quality Management dia voamarina ho ISO 9001: 2015, ISO14001, ISO451001, ISO1461.
Ny fitantanana ny XY Tower dia manolo-tena hampandeha ny lafiny rehetra amin'ny orinasa amin'ireo fenitra izay manome serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa rehetra. Ity dia tohanan'ny fomba fitantanana mandroso izay mandrisika ny kolontsaina manara-penitra manerana ny orinasa.
Ny mpitantana dia manolo-tena amin'ny fanatsarana hatrany ny fitantanana kalitao. Izany dia hiantohana ny fiasan'ny orinasa amin'ny fomba mahomby sy mahomby ary mahafeno ny filan'ny mpanjifanay.
Ny QA / QC dia tarihin'ireo mpanara-maso voaofana tsara izay mampiasa fitaovana fanandramana maoderina mba hiantohana ireo fenitra avo lenta sy famaranana tsara. Ity departemanta ity dia tarihin'ny tale jeneraly mivantana.
Ny asan'ny QA / QC dia manome antoka fa ny akora rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra ISO na ny fenitra takiana takiana amin'ny mpanjifa. Ny hetsika fanaraha-maso kalitao dia manomboka amin'ny akora amin'ny alàlan'ny fanamboarana sy ny galvanizing mandra-pahatongan'ny fandefasana farany. Ary ny hetsika fanaraha-maso rehetra dia ho voasoratra ara-dalàna ao amin'ny Lisitry ny fanamboarana.
QA / QC dia fomba iray hitazomana ny kalitao. Ny fametrahana kolontsaina manara-penitra manerana ny orinasa no zava-dehibe kokoa. Mino ny fitantanana fa tsy miankina amin'ny departemanta QA / QC ny kalitaon'ny vokatra, dia ny mpiasa rehetra no mamaritra azy. Noho izany, ny mpiasa rehetra dia nampandrenesina ny fanoloran-kevitry ny mpitantana an'ity politika ity indrindra sy ny kalitao amin'ny ankapobeny ary entanina izy ireo haneho ny fanohanany manokana ny rafitra amin'ny fandraisana anjara mavitrika.